Mokary sy voanio | Ma.Mi.Na
Mokary sy voanio
Soumis par Andry Mamina le jeu, 03/09/2017 - 06:16
ODY AMBAVA FO na SAKAFO MARAINA : MOKARY na MOFOGASY
Mokary na mofogasy ihany hoy aho fa tena gasy petaka be ny nanao azy sy ny fitaovana ary ny vokatra hihihi , vao voalohany ity fa ratsy bika fa tsara tsiro an
kobambary 250 g,
lalovay 1 fonosana "levure boulanger"
menaka 3 sotro fihinanana ary
rano matimaty 250ml eo ho eo araraka tsikelikely . (azo ampiana rononom-boanio "lait de coco" )
Ny lalovay aloha alona amin'ny rano matimaty kely ho levona. Avy eo maka bol dia atao ao daholo ireo zavatra maina rehetra, lafarina, koba, vovoka voanio ary ny atody efa nokapohana , arotsaka koa ilay levure ary avy eo ny rano ambiny araraka tsikelikely dia nafangaro tsara ireo rehetra ireo mba tsy hivaingambaingana izay vao arotsaka ny voanio vovony sy ny siramamy ary rehefa manome pate malama tsara dia navela nilona nandritra ny ora 2 ka nosaromana lamba.
Rehefa tapitra ny fotoana dia lasa misy toy ny "boule" kely be dia be ilay paty, afaka andrahoina amin'izay ka hosorana menaka isaky ny lavaka sy manodidina dia lasa zao.
nahavita teo amin'ny 30 teo aho fa tsy nisaiko, fa lany tsara aloha ilay tsy may hihihi
Maka "pinceau" avy eo fa eto ny ahy fourchette no nasiana "essui tout " hakana ny menaka dia notazomiko tamin'ny elastika ady gasy e
manomana bol na kopy asiana menaka dia lalorina menaka avokoa ny lasitra na tavy rehetra ny ao anatiny ny tapony manodidina ary ny tahony, iny dia mba tsy hahamainty be azy rehefa mahandro sady mba tsy hiraikitra
Mirary soa o